Qeybta:Ogaysiiska14 min akhris
Abaalmarinta Aqoonyahannada 207 ee McKnight
Meey 28, 2020
Guddiga Agaasimayaasha Sanduuqa McKnight Endowment for Neuroscience ayaa ku faraxsan inay ku dhawaaqaan inay doorteen lix kalkaaliyeyaal caafimaad ah si ay u helaan Abaalmarinta Aqoonyahan McKnight ee 2020.
Abaalmarinta Aqoonyahannada 'McKnight Scholar Awards' waxaa la siiyaa saynisyahano da 'yarta ah kuwaas oo ku jira heerarkii hore ee abuuritaanka shaybaarro madax banaan iyo xirfado cilmi baaris oo muujiyey inay ka go'an tahay neerfaha. Kelsey C. Martin, MD, Ph.D, gudoomiyaha gudiga abaalmarinta iyo lataliyaha David Geffen School of Medicine ee UCLA ayaa yidhi "Aqoonyahanada sanadkaan waxay tusaaleeyaan awooda neerfaha casriga ee casriga ah ee lagu dhisayo cilmiga bayoolajiga maskaxda iyo maskaxda." Tan iyo markii abaalmarintan la soo bandhigay sanadkii 1977, abaalmarintan sharafta leh ee shaqo-helidda hore waxaa maalgeliyey in ka badan 240 baarayaal hal-abuurnimo waxayna kicisay boqolaal daahfurka daahfurka.
“Iyada oo la habeeyo dariiqooyin qaabab kala duwan oo ah qaab dhismeedka noocyada kala duwan, Aqoonyahanada 2020 ee McKnight waxay horumarineyaan niyada maskaxda ee isdhexgalka maskaxda-iyo isku xirnaanta waalidka-dhallaanka, sahaminta caqliga kombuyuutarrada ee qorshaynta dhaqdhaqaaqa maskaxda ee maskaxda iyo caqliga xakameynta hiddaha ee xannibaadda. Kortex, ogaanshaha iyo astaamaha kanaalada chloride-ka sheeko ee neurons-ka, iyo adeegsiga qaabab ku saleysan qaab-dhismeedka si loo sameeyo daweyn cusub oo lagu bar-tilmaameedsado qaabilaadaha serotonin, ”ayuu yiri Martin. "Anigoo ku hadlaya magaca guddiga oo dhan, waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhammaan codsadayaasha sannadkan ee Abaalmarinta Aqoonyahannada McKnight ee ku saabsan deeqdooda waxbarasho ee hal-abuurka ah iyo ku biirinta neuroscience."
Mid kasta oo ka mid ah lixda qof ee qaata abaalmarinta "McKnight Scholar Award" waxay heli doonaan $ 75,000 sanadkiiba muddo saddex sano ah. Waxay yihiin:
Machadka Teknolojiyada Massachusetts - Cambridge, MA
Daraasad ku saabsan sida ay bakteeriyada mindhicirku u saameyso waxqabadka maskaxda iyo dhaqanka.
Kulliyadda Caafimaadka ee Baylor - Houston, TX
Xisaabinta Cerebellar Inta lagu Jiro Qorsheynta Wadista
Baadhista habka ay u shaqeeyaan qaybaha kala duwan ee maskaxda, oo ay ku jiraan cerebellum, iskuduwaha si loo qorsheeyo dhaqdhaqaaqa jirka.
Jaamacadda Stanford - Stanford, CA
Daraasad ku saabsan waxa ku dhaca maskaxda carruurta xayawaanka ah inta lagu gudajiro xiriirka waalidnimada, iyo saamaynta geedi socodkan neuronal-ka waxay ku leedahay go'aan qaadashada mustaqbal iyo wanaagga qaangaarka.
Jaamacadda Johns Hopkins - Baltimore, MD
Daraasad lagu sameeyay hidda-wadeyaasha sababa kanaalka kala-duwan ee chloride-ka, iyo dowrkooda ku aaddan xakameynta xad-dhaafka neerfayaasha iyo caagagga synaptik.
Jaamacadda Columbia - New York, NY
Sahaminta isbeddelka wareegga xididdada neural-ka iyadoo la baranayo noocyada neuron-ka ee hore ee xayawaannada leh maskaxda maskaxda fudud si loo weeciyo aasaaska aasaasiga ah ee abaabulka maskaxda iyo shaqada.
Dugsiga Caafimaadka Icahn ee Mount Siinaay - New York, NY
Dardargelinta Helitaanka Daawooyinka ee Cilladaha Maskaxda ee loo maro Daraasadaha Dhismaha ee Receptor-ka Serotonin
Go'aaminta qaab dhismeedka gaar ahaan loo yaqaan 'serotonin receptor' oo ku xiran garashada, iyo u isticmaalidda qaab dhismeedkaas si loo aqoonsado xirmooyinka laga yaabo inay ku xirnaadaan soo dhoweeyaha qaab gaar ah oo lagu hormarinayo daahfurka daaweynta daroogada.
Waxaa jiray 58 codsadeyaal abaalmarinta sannadlaha ah ee 'McKnight Scholar Awards', oo matalaysa kuliyadda ugu wanaagsan ee da'da maskaxda ee waddanka. Kulliyadu waxay xaq u leeyihiin kaliya abaalmarinta afarta sano ee ugu horeysa si buuxda oo ay u shaqeeyaan booska kuliyada. Marka lagu daro Martin, guddiga xulashada abaalmarinta aqoonyahannada waxaa ka mid ah Dora Angelaki, Ph.D., Jaamacadda New York; Gordon Fishell, Ph.D., Jaamacadda Harvard; Loren Frank, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco; Mark Goldman, Ph.D., Jaamacadda California, Davis; Richard Mooney, Ph.D., Dugsiga Caafimaadka ee Jaamacadda Duke; Amita Sehgal, Ph.D., Iskuulka Caafimaadka ee Jaamacadda Pennsylvania; iyo Michael Shadlen, MD, Ph.D., Columbia University.
Codsiyada abaalmarinta sanadka soo socda waxaa la heli doonaa Ogosto waxaana la rabaa in ay gaarto Janaayo 4, 2021. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijyada abaalmarinta neerfaha ee 'McKnight', fadlan booqo websaydhka 'Endowment Fund' websaydhka. https://www.mcknight.org/programs/the-mcknight-endowment-fund-for-neuroscience
Ku saabsan Sanduuqa Maaliyadda ee McKnight Fund for Neuroscience
Sanduuqa McKnight Endowment for Neuroscience waa urur madax-bannaan oo ay maal-geliso oo keliya The McKnight Foundation ee Minneapolis, Minnesota, waxaana hoggaamiya guddi caan ah oo ku takhasusay neerfayaasha neerfaha ee waddanka oo dhan. Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay taageertay cilmi-baaris xagga maskaxda ah ilaa 1977. Aasaaska wuxuu aasaasay Sanduuqa Endowment 1986 si loo fuliyo mid ka mid ah ujeeddooyinka aasaasihii William L. McKnight (1887-1979). Mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii hore ee Shirkadda 3M, wuxuu lahaa dan shaqsiyadeed xagga xusuusta iyo cudurada maskaxda wuxuuna doonayay qayb ka mid ah dhaxalkiisii uu u adeegsan jiray si looga helo daaweyn. Sanduuqa Endowment wuxuu sameeyaa seddex nooc oo abaalmarin ah sanad walba. Marka lagu daro Abaalmarinta Aqoonyahannada McKnight, waxay yihiin McKnight Soo-saarka Tiknolojiyadda ee abaalmarinta Neuroscience, oo bixiya lacag abuur si loo horumariyo wax-soo-saarka farsamada si kor loogu qaado cilmi-baarista maskaxda; iyo McKnight Neurobiology of Brain Disorders Awards, oo loogu talo galay saynisyahano ka shaqeynaya sidii loo dabaqi lahaa aqoonta lagu gaadhay tarjumaadda iyo cilmi-baarista caafimaad ee cilladaha maskaxda maskaxda.
Steven Flavell, Ph.D. Kaaliyaha Professor, Machadka Piower ee Waxbarista iyo Xusuusta, Machadka Teknolojiyadda Massachusetts, Cambridge, MA
Sanadihii la soo dhaafay, waxaa kordhay xiisaha microbiome-ka mindhicirka - isku-darka bakteeriyada ku nool mareenka dheef-shiidka - iyo saamayntooda guud ahaan caafimaadka. Dr. Flavell wuxuu samayn doonaa taxane tijaabooyin ah si uu uga jawaabo su'aalaha aasaasiga ah ee ku saabsan sida mindhicirka iyo maskaxdu u falgalaan, sida jiritaanka bakteeriyada qaar ay u dhaqdhaqaaqeyso neerfayaasha iyo sida ay tani u saameynayso dabeecadda xayawaanka. Baadhitaankan ayaa furi kara khadad cusub oo baaritaan ah oo ku saabsan microbiome-ka aadanaha iyo sida uu u saameeyo caafimaadka aadanaha iyo cudur, oo ay ku jiraan cilladaha neerfa iyo maskaxda.
Wax yar ayaa laga fahmay sida mindhicirka iyo maskaxdu si farsamo ahaan ula falgalaan - yahee neurons-yada firfircoonaanta jiritaanka bakteeriyada? Maxay raadinayaan? Calaamado noocee ah ayay diraan iyo xaggee? Oo sidee bay maskaxdu u socodsiisaa calaamadahaas oo u beddelaan dhaqan? Baadhitaanka Dr. Flavell wuxuu ku dhismi doonaa daahfurka sheybaarka uu sameeyay barashada The C. xarrago dixirigoodu, kaasoo nidaamkiisa fudud oo si wanaagsan loo qeexay wuxuu dhalin karaa dabeecad aad u adag oo si fudud looga barto sheybaarka.
Dr. Flavell iyo kooxdiisu waxay aqoonsadeen nooc gaar ah oo neuron (neurons dahaarka mindhicirka) oo kaliya firfircoon halka C. xarrago quudiyaan bakteeriyada. Tijaabooyinkiisa waxay cadeynayaan calaamadaha bakteeriyada ee dhaqdhaqaaqa neurons-ka, baari doona doorarka neuronsyada kale ee tilmaamida maskaxda, waxayna baari doonaan sida jawaab celinta maskaxda ay u saameyso ogaanshaha bakteeriyada qanjirka. Tusaale ahaan, neurons-ga oo ah nooca C. xarrago u diro maskaxda markay ogaadaan bakteeriyada, si dirxiyuhu u gaabiyo una foosho. Tijaabadu waxay cadeyn doontaa nusqaanka howshan, sida sida calaamadeynta iyo dabeecadu isu bedesho marka dixirku uu buuxo ama uu la kulmo noocyo kala duwan oo bakteeriyada ah, iyo waxa dhaca marka nashaadka neurons-galka la carqaladeeyo. Fahmitaanka qaababkan asaasiga ah waxay gacan ka geysan kartaa cilmi baarista mustaqbalka furitaanka sida bakteeriyada mindhicirka ee ku jirta aadanaha ay ugu xiran tahay dabeecadaha adag ee dabeecadda iyo dareemaha.
Waqtigu waa wax walba markay tahay muruqyada dhaqaajiya hab qorsheysan. Daraasadda Dr. Li waxay isticmaashaa moodeelka moodeelka si ay sifiican uga baaraandegto faahfaahin ka badan daraasadihii hore waxa maskaxdu qabaneyso inta udhaxeysa qorshaha iyo dhaqdhaqaaqa. Mowduucii hore, ee la fududeeyay ee maskaxda loo isticmaalay in lagu sawiro kilkilaha hore, halkaas oo sababaynta u dhacdo, sida xarunta kontaroolada, iyo cerebellum, oo ah qayb qadiimi ah oo maskaxda ah, aalad ahaan loogu diro calaamadaha muruqyada. Aragtidaas ayaa noqotay mid sii xumaatay, iyadoo cilmi baarayaashu ay soo dhejinayaan in qaybo badan oo maskaxda ka mid ah ay ku lug leeyihiin fakarka iyo qorshaynta.
Shaybaarka Dr. Li ayaa shaaca ka qaaday in kiliyaha dambe ee dambe (ALM, qayb gaar ah oo ka mid ah jiirka hore ee kilkilaha) iyo cerebellum ay ku xirnaadaan xarig halka jiirka uu qorsheynayo ficil. Weli lama oga illaa iyo hadda sida saxda ah ee macluumaadka loo gudbiyo iyo gadaal, laakiin way ka duwan tahay astaamaha dhabta ah ee murqaha murjiya. Haddii isku xirku carqaladeeyo xitaa isla markiiba inta lagu gudajiro qorshaha, dhaqdhaqaaqa si khalad ah ayaa loo sameyn doonaa. Dhanka kale, maskaxdu waxay sidoo kale u isticmaali kartaa wakhtigaas inay u beddesho jawaab-celinta qorshe u wanaajinaya dhaqdhaqaaqa ku xiga, habka uu kubadaha kubbadda koleyga wax u badalo ka dib markii uu daawado seegay.
Tijaabooyinka Dr. Li waxay daaha ka qaadi doonaan doorka cerebellum ee qorshaynta matoorka waxayna qeexi doonaan qaabdhismeedka jirka ee isku xiraya iyo ALM. Wuxuu khariidayn doonaa kiliyaha 'cerebellar cortex' wuxuuna ogaan doonaa tirada dadka nooc unug gaar ah loo adeegsaday xisaabinta cerebellar, oo loo yaqaan unugyada 'Purkinje', oo ay ku shaqeeyaan ALM xagga qorsheynta gawaarida, iyo waxa calaamadaha ay u diraan ama soo gudbaan inta ay qorsheynayaan. Ujeeddada labaad ayaa sahmin doonta nooca xisaabinta ee cerebellum ku hawlan yahay. Tijaabadu waxay adeegsaneysaa jiirka loo tababbaray inay ficil gaar ah sameyaan waqti ka dib markay arkaan calaamadaha. Adoo fiirinaya waxa qaybo ka mid ah maskaxda ay dhaqdhaqaaqayaan mudadaas la filayo in xayawaanku uusan dhaqaaqin laakiin uu isku diyaarinayo inuu dhaqaaqo, ka dibna adoo ka duulaya habkaas, Li wuxuu waxbadan ka baran doonaa qaabdhismeedkaan maskaxda ee asaasiga ah.
Lauren O'Connell, Ph.D., Caawiyaha Professor of Biology, Jaamacadda Stanford, Stanford, CA
Xiriirka waalidka iyo dhallaanka ayaa muhiim u ah wanaagga bulshada oo dhan, aadanaha iyo xayawaankaba. Kaliya kaliya ma taageerto caafimaadka jirka, waxay sidoo kale saameyn ku leedahay dabeecadaha iyo xulashada shaqsiyaadka markay weynaadaan. Shaqada Dr. O'Connell waxay gacan ka geysan doontaa in la garto sida xasuusta loogu sameeyo caruurnimada iyaga oo qayb ka ah habka isku xidhka, waxay raadindoontaa fikradaha xusuustaas si loo aqoonsado sida ay u saamaynayaan go'aan gaadhista mustaqbalka, waxayna sahamin doontaa saamaynta neerfayaasha ee carqaladaynta.
Mashruucan wuxuu adeegsanayaa nooc shinbiro sun ah, oo loo xushay habdhaqankiisa ku xirnaanshaha waalidnimo / dhallaanka oo lagu arko bixinta waalidku siinayo. Faa'iidooyin dheeraad ah oo loogu talagalay moodada sunta ah ee loo yaqaan 'frog' physiology ', ayaa u oggolaaneysa in si muuqata looga fiirsado dabeecadda neerfayaasha. Dhaqan isku xidhka ayaa ah mid qadiim ah wuxuuna ka muuqdaa gobolada maskaxda oo inbadan laga ilaaliyay amphibianska ilaa xayawaanka. In kasta oo ay jiraan baaritaano la baareynayo saameynta isku xirnaanta aragtida waalidka, wax yar ayaa laga fahmay sida ay ku dhacdo dhallaanka ama saameynta neerfayaasha.
Furumaha O'Connell wuxuu baranayaa, dabeecadda isku xirnaanta waxaa ka mid ah muujinta tuugada ee loo yaqaan 'tadpoles', taas oo waalidka u horseedda inuu siiyo ukunta aan looga talagalin cunnada. Helitaanka cunnadaas iyo daryeelku waxay u horseedaysaa tadpole inuu ku sawiro waalidka, kaas oo isna saameyn ku leh doorashada tadpole ee lamaanaha mustaqbalka: waxay doorbidi doontaa saaxiibbada u muuqda kuwa daryeelaha ah. O'Connell wuxuu aqoonsaday calaamadaha neuronal-ka ee ku hodansan tadpoles-ka cuntada weydiya, wuxuuna ogaaday in neurons-yadaani ay la mid yihiin kuwa ku lug leh arrimo badan oo neerfaha ah oo la xiriira barashada iyo dhaqanka bulshada ee aadanaha. Daraasaddeeda ayaa sahamin doonta qaab dhismeedka neuronal ee ku lug leh aqoonsiga ilmaha iyo xiriirka ay la leeyihiin daryeelayaasha, iyo sidoo kale waxqabadka maskaxda marka la sameynayo xulashooyinka lamaanaha goor dambe nolosha, si loo arko sida waxqabadka neuronal ee geeddi-socod kasta uu ula xiriiro xaaladaha caadiga ah iyo goorta xirnaashaha la carqaladeeyo.
Zhaozhu Qiu, Ph.D., Kaaliyaha Professor of Physiology iyo Neuroscience, Jaamacadda Johns Hopkins, Baltimore, MD
Jidadka 'Ion' waa laf-dhabarta maskaxda si uu u sii wado shaqadiisa caadiga ah. Waxay xukumaan awooda xuubka neuronal iyo excitability iyo sidoo kale gudbinta synaptik iyo caaga. Waxay ku lug leeyihiin xanuunno badan oo xagga maskaxda iyo maskaxda ah, sidaa darteedna waa bartilmaameedyo waaweyn oo daroogo ah. Inta badan cilmi baarista waxaa diiradda lagu saaray kanaalada ion kana fulinaya ion kan si fiican loo xukumay, sida sodium, potassium iyo kalsiyum. Si kastaba ha noqotee, shaqada ee kanaalada ion kanaallo u oggolaanaya gudbinta chloride, oo ah kuwa ugu badan ee si xun u eedeeya, ayaa si liidata loo fahmay.
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ayaa ah aqoonsiga aan la garanaynin ee hiddo-wadaha ee haaya qaar ka mid ah kanaalada chloride kala duwan. Markii la sameynayay shaashadda unugyada sare ee unugyada jirka, Dr. Qiu iyo kooxdiisa cilmi baarista waxay aqoonsadeen laba qoys oo cusub oo ah kanaalada chloride, oo ay ku dheehan tahay kordhinta mugga unugyada iyo aashitada pH-ga, siday u kala horreeyaan. Adeegsiga iskudhafyada korantada, cilmiga bayoolaji, sawirka iyo farsamooyinka dabeecadda, cilmi baarista Dr. Qiu waxay ujeeddadeedu tahay in la baaro shaqada neerfaha ee wadooyinka cusub ee ion-ka iyada oo diiradda la saarayo is-dhexgalka neuron-glia, caagga synaptic, iyo barashada iyo xusuusta.
Dr. Qiu wuxuu ku fidin doonaa qaabkan kanaalada kale ee qarsoon ee maskaxda. Wuxuu sidoo kale qorsheynayaa inuu soo saaro habab cusub iyo qalab lagu cabiro laguna maareynayo isku-haynta koloriin ee heerarka unugyada iyo hoosta ee unugyada nool iyo xayawaanka, kuwaasoo xilligan soo bandhigaya caqabado farsamo oo weyn oo ku sugan arimahan. Daraasaddiisa ayaa bixin doonta aragtiyo muhiim ah oo ku saabsan sida koloriin loogu habeeyo nidaamka dareemayaasha. Waxay u horseedi kartaa daweyn cusub oo loogu talagalay cudurrada neerfayaasha ee la xiriira maaddada loo yaqaan 'chloride dysregulation'.
Maria Antonietta Dusha sare, F.D., Kaaliyaha Professor, Columbia University, New York, NY
Waxay tijaabin kartaa inaad u aragto maskaxda inay tahay shey injineernimo, oo sida ugu fiican loogu talagalay inay fuliso howlaheeda adag. Xaqiiqdii, maskaxda maskaxeed casri ah waxaa qaabeeyey taariikh dheer oo horumarineed, halkaasoo waqti kasta oo caqabad horusocod ah, qeybaha jira ay soo noqnoqdeen, la tarmay oo la kala qeybiyey. Dr. Tosches wuxuu sameynayaa daraasad si uu u fahmo geedi socodyadaan oo uu u ogaado waxa nidaamyada aasaasiga ah ee nabadeed ay ku keydsan tahay xayawaanka iskuxiran ee ay kala joogaan boqolaal milyan oo sano oo horumar ah.
Si taas loo gaaro, Dr. Tosches wuxuu sahaminayaa taariikhda isbeddelka cudurka neerfaha ee GABAergic, kaasoo kaalin muhiim ah ka hortaga nidaamka neerfaha dhexe ee naasaha. Tijaabooyinkeedii hore waxay heleen GABAergic neurons ee xamaaratada iyo xayawaanada ayaa hiddo ahaan la mid ah, taasoo muujineysa in noocyadan neuron-ka ah ay horay uga jireen awoowayaasha laf-dhabarka; waxay sidoo kale wadaagaan cutubyo hidde oo la xiriira shaqooyinka neerfaha gaarka ah ee labada nooc ee maskaxda. Daraasadda cusub ee Tosches, waxay go'aamineysaa haddii noocyadan neuron-ka ah laga helo maskaxda fudud ee salafiyiinta.
Baadhitaanku wuxuu ku lug leeyahay kala dambeynta tobanaan kun oo unugyo shaqsiyaad ah oo ka socda salaadiinyadan iyo isbarbar dhigga noocyada unugyada GABAergic ee laga helo kuwa jiirarka iyo kunleyda, si loo dhiso mideysan canshuur-qaadis muruqyada neurons-ka ee tetrapods. Tallaabada xigta waa in la isbarbar dhigaa mowjadaha hiddo-wadaha si loo fahmo farsamooyinka hidda-wadaha ee sababay in gABAergic neuron subtypes. Ujeeddada labaad, Tosches iyo kooxdeeda waxay duubi doonaan waxqabadka salamander GABAergic neurons iyagoo leh sawirka vivo inta lagu gudajiro tijaabooyinka dabeecadda, raadraaca waxqabadka neurons-yadaas markii la soo bandhigo dhiirrigelin. Shaqadani waxay soo bandhigi doontaa nooc xayawaan ah oo cusub oo loogu talagalay wareegga 'neuroscience', iyada oo lagu dari doono fahamkeena sida maskaxdu u shaqeyso heer aasaasi ah.
Helitaanka dawooyinka si wax looga qabto ciladaha neerfayaasha iyo garashada waa hawl adag oo waqti qaadata. Daawooyin badan ayaa bartilmaameedsanaya dhakhaatiirta dopamine-ka oo xiriir la leh qabatinka maandooriyaha, daawooyinka qaarna waa kuwa aan saxnayn oo abuuraya waxyeelo khatar ah. Intaa waxaa sii dheer, ciladaha qaarkood (Alzheimer waa tusaale caan ah) oo aan lahayn daawayn daroogo gabi ahaanba. Dr. Wacker wuxuu soo jeedinayaa hab cusub oo daahfuran oo lagu ogaanayo daroogada kaas oo diirada saaraya helitaanka serotonin gaar ah (kaas oo aan laheyn halista la mid ah sida dhaqaajinta nidaamka loo yaqaan 'dopamine system'), si taxaddar leh u naqshadeeya qaabdhismeedka receptor-ka cabirka molikalikada, iyo raadinta xeryo ku habboon ku xidho rasiidkaas qaab gaar ah.
Soo-dhoweynta, oo loo yaqaan 5-HT7R, waxaa la ogaadey bartamihii 1990-meeyadii waana mid ka mid ah 12-ka dadka loo yaqaan 'Serotonin receptors'. Waxaa loo aqoonsaday inay tahay bartilmaameed rajo leh oo loogu talagalay daweynta daaweynta cudurada garashada, laakiin wax yar ayaa laga ogyahay. Dr. Wacker wuxuu soo jeedinayaa in la sameeyo daraasad qaab dhismeedka soo-dhoweedka iyadoo la adeegsanayo qalabka raajada loo yaqaan 'X-ray crystallography' oo ku saabsan muunadaha la daahiriyey ee soo dhoweynta. Wuxuu baari doonaa sida daroogada ay ugu xiran tahay soo dhoweeyaha wuxuuna soo bandhigi doonaa isbedelo qaab dhismeedka si loo arko sida ay taasi u saameynayso isku xirnaanta iyo is dhexgalka. Hadafku waa in la helo xeryo ku firfircoon oo kaliya hal kan qaataha qaab gaar ah.
Si loo helo dawooyinkan suurtagalka ah, kooxda Wacker waxay markaa sameyn doonaan baaritaan kombuyuutar ah oo boqolaal milyan ah, iyagoo isbarbar dhigaya qaab dhismeedkooda 3D iyo qaabka 3D ee qaabilayaha kuwa ay u badan tahay inay “ku habboonaan karaan." Rajada ugu sareysa ayaa si dhow loo kormeeri doonaa, iyo in yar oo musharixiin ah oo rajo wanaagsan leh ayaa laga tijaabin doonaa sheybaarka. Marka la barbardhigo hanaan dhaqameed oo tijaabooyin daroogo ah, oo qaadan kara sannado, xitaa tobannaan sano, geeddi-socodkan kombuyuutareedku wuxuu siinayaa fursad ah aasaasi ahaan daawooyinka hore-u-eegga ah ee ku saleysan qaab-dhiskooda, iyo dardar-gelinta horumarkooda.
Mawduuca: Sanduuqa McKnight Fund for Neuroscience, Abaalmarinta Ardayda
2019 abaalmarin mcknight scholar